Mgbe bụ Chinese New Year 2017 - Gịnị bụ 2017 Animal nke Year? Mgbe bụ Chinese New Year 2017 - Gịnị bụ 2017 Animal nke Year?
Mgbe bụ Chinese New Year 2017 – Gịnị bụ 2017 Animal nke Year?
Chinese New Year is usually celebrated after a month from the original new year and it is one of the widely celebrated festivals across China. If you’re still wondering about Mgbe bụ Chinese New Year 2017..ị na-ebe a na-nri ebe.
Olee otú Chinese usọrọ Chinese New Year 2017?
Chinese nwere a ịdịghachi ezinụlọ na ndị enyi n'elu nri abalị na-amalite na ememe nke Chinese New Year n'ụzọ dị otú a. The ememe nke Chinese New Year bụ nnukwu na pompous.
Ọtụtụ mgbanwe onyinye na 2017 China afọ ọhụrụ na-achọ onye ọ bụla ọzọ na ngọzi maka afọ na-abịa.
Gịnị mere na Chinese New Year ememe?
The Chinese New Year na-eme ememe site Chinese ọrụ ugbo na-akara mmalite nke ọhụrụ kụrụ n'ubi na-ịchọrọ nke ezi owuwe ihe ubi na oge. The omenala e iso ebe ọ bụ na afọ na otu a na-rụrụ zijere site na nke ugbu a ọgbọ na Chinese na afọ ọhụrụ ememe na-akwa kwa afọ.
Lelee: Chinese New Year 2017 Quotes
Kwa afọ, Chinese New afọ nwere anụmanụ metụtara ya. Chinese New Year 2017 Animal bụ ọkpa ie. a nwaanyị nnụnụ.
Chinese New Year 2017 Animal: ọkpa
Chinese New Year 2018 Animal: nkịta
Mgbe bụ Chinese New Year 2017?
Chinese New Year 2017 Ụbọchị: 28nke January, 2017
Anyị na-atụ nke a zara ajụjụ gị, mgbe bụ China afọ ọhụrụ 2017.
Gịnị ka Chinese eme on Chinese New Year 2017?
Onyinye Red Envelopes chioma na enyi
The Chinese onyinye mara mma red envelopes ka China afọ ọhụrụ onyinye ga-achọ chioma ka enyi na-agbasa obi ụtọ. The mmekọrịta E ji gbaa ibè kwụ na nri abalị ọnụ.
Icho mma ụlọ na Red agba
The ụlọ na-mma na-acha uhie uhie chaatị dị iche iche, red ndu na niile ji achọ ihe na-acha uhie uhie na agba aṅụrị China afọ ọhụrụ 2017. Dị iche iche asọmpi na-ẹkenịmde.
bursting FireCrackers – Obi ụtọ na Chinese New Year 2017
Olee otú mmadụ pụrụ usọrọ afọ ọhụrụ na-enweghị bursting crackers. The Chinese wupu firecrackers usọrọ afọ ọhụrụ. Ihu igwe na-ese red na firecrackers mkpatụ ndị nke mbụ n'abalị dum. The ememe bụ nnukwu na nnukwu ìgwè mmadụ achịkọta gburugburu isi ihe n'obodo usọrọ a magburu ocassion.
Lelee: Chinese New Year na akwụkwọ ahụ aja 2017
Chinese kpee ekpere na China amaokwu on Chinese New Year 2017.
Anyị na-atụ ị hụrụ anyị isiokwu akụkọ na ga-eso nke a na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ. Anyị na-atụ ugbu a ị na-doro anya na Mgbe bụ Chinese New Year 2017 na Chinese New Year 2017 Animal?